Pr Beza Seramila : « EFA HITA-MASO NY FAMPANDROSOANA » -
AccueilVaovao SamihafaPr Beza Seramila : « EFA HITA-MASO NY FAMPANDROSOANA »
Pr Beza Seramila : « EFA HITA-MASO NY FAMPANDROSOANA »
14/02/2017 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Ao anatin’izao fotoana efa hiatrehana ny fampandrosoana izao dia maro no manana hevitra ary te-hizara izany amin’ny mpiray tanindrazana. Dinika natao tamin’i mpitarika ny Gec na « Groupe d’Eclaireur de Contact », Pr Beza Seramila no jerentsika. Izy dia ao anatin’ny Vovonana Tsy mialonjafy izay.
Triatra (+) : Tahaka ny ahoana no fahitanao ny zava-misy mikasika ny fampandrosoana amin’izao fotoana izao ?
Beza Seramila (-) : « Ny zavatra tsapa aloha dia hita ihany ny ezaka fampandrosoana eto amin’ny firenena saingy mila mafimafy kokoa ny ady amin’ny risoriso sy ny kolikoly ary ny tsy fandriam-pahalemana, mba hahatsara ny fari-piainan’ny olona ary mba ahita tombony amin’ny fihariana ny vahoaka. Mbola tsy ho vita ny fanafoanana izany anatin’ny fotoana fohy. Ilaina fifampidinihana ny hamongorana an’ireo. Tahaka izany koa ny tokony hiatrehana ny resaka hain-tany na any Atsimo na eto afovoan-tany satria mila dinihina ny fiovan’ny toetrandro sy ny resaka doro tanety mba hampihena azy, ao anatin’izany koa ny fandripahana ny ala sy ny tontolo iainana, ny hanatsarana izany. Hatramin’izao dia mbola mijoro ny vovonana tsy manao fanakianana be fahatany na midoka ny fitondrana fa miezaka manatsara ny zava-misy mba hisian’ny fifanatonana”.
(+): Fiteninao matetika ny hoe tsy tanjona ny fakana fahefana eny an-dalambe. Inona no tianao hazavaina amin’io?
(-): “Ny mpanao politika no tena tia manao an’io. Ny vahoaka efa leo amin’ny fidinana eny an-dalambe satria tsy hitany izay vokatra ho azy fa lasa ireo mpitondra tafakatra eo no mahazo vahana. Efa tsy mety intsony izany ary tsy tanjona ny mihitsy ny fakana fahefana eny an-dalambe. Tsy tokony ho ny mpanao politika no mitarika ny vahoaka hidina an-dalambe fa ny vahoaka ihany no mametra izany rehefa avy amin’ny zavatra tsy tantiny intsony. Izany fidinana an-dalambe izany dia efa tsy fidiny amin’ny vahoaka no manao an’izany. Matetika mantsy dia ny mpanao politika no tena tompon-kevitra amin’ireny. Ny zavatra ambarako anefa dia hoe ny fanatsarana ny zavatra iainana amin’izao aloha no tokony atao fa ny vahoaka tsy mila izany intsony. Ny tokony atao dia ny hoe ahoana no handaminana ny firenena araka ny andrasan’ny vahoaka amin’ny fitondrana sy ny fanaovana politika, fifanampiana mba ataon’ny malala tanana avy any ivelany”.
(+): Inona no hevitrao mikasika ny fampihavanam-pirenena?
(-) : “Ny vovonana dia mametraka fa tena ilaina ny fampihavanam-pirenena. Ny tena tadiavina dia hoe iza ilay mpampihavana? Iza no olona eken’ny vahoaka sy ny besinimaro fa tokony hanao an’io. Ny ampihavanina dia ny mpanao politika sy ny mpitondra miaraka amin’ireo mpanohana azy. Hatramin’izay dia ny Ffkm no noeritreretina hanao izany fampihavanana izany. Mbola eken’ny besinimaro ve izay sa tsia? Mila matotra tsara io fa na dia hoe fanjakana aza no hanao an’io ka rehefa eken’ny rehetra dia manaiky ny Gec. Mila mifanaraka tsara fa raha toa ka misy zavatra nifanarahana tsy tanteraka dia mety handringa. Ilay mpampihavana dia sady mampihavana no manara-maso ny fampiharana izay voalaza sy nifanarahana, niaraha-nanapaka”.
(+) : Mandeha ny resaka momba ny fanovana governemanta? Inona no hevitrao?
(-) : “Ny fanovana dia tokony hisy fifampidinihana mialoha, ary tokony hifanarahana tsara fa manjary manao fahadisoana tahaka ny teo aloha ihany raha tsy misy izay fifampidinihana izay. Zavatra tokony hifanarahana tsara, izany hoe misy fifampitokisana tadiavina ao anatin’izay fifanarahana izay. Amin’izay dia mba zavatra hoe mbola tsy hiova ao anatin’ny fotoana fohy. Ny fifanarahana dia apetraka tsara fa izay tsy mahavita ny asany dia soloina. Ny hanova governemanta fotsiny amin’izao dia tahaka ny manao ny zavatra efa tsy nety nataon’ny teo aloha ihany raha tsy misy fifampidinihana”.
Ireo no ampahany tamin’ny dinika nifanaovana tamin’ity Profesora ity amin’ny lafin’ny fiainam-pirenena sy ny fitsokan’ny rivotra politika no nitondrany fanazavana.